Waa maxay sababta nin Jabuutiyaan ah looga dhigay afhayeenka AMISOM ?
Updated About:345 days ago 0
Sarkaal Jabuutiyaan ah ayaa shalay loo magacaabay afhayeenka ciidamada Midowga Africa ee jooga Soomaaliya kaasi oo badali doono afhayeenki hore oo ahaa nin u dhashay dalka Uganda.
Collonel, Cabdi Aadan Xaamud ayaa ah nin ku hadla Afsoomaaliga iyo luqadaha kale ee Franch, Enlglish, Carabi iyo luqada Cafarta ayaa xilka kala wareegay Pady Ankunda oo ahaa in muda ah afhayeenka AMISOM.
Sida ay leeyihiin saraakiisha AMISOM sababta loo magacaabay afhayeenkan ayaa ah isaga oo si wanaagsan ula hadli kara Soomaalida, shacabka Jabuuti, iyo dhamaan dadka caalamka.
Munaasabad shalay ka dhacday xarunta Xalane ee taliska ugu weyn Amisom ee Muqdisho ayey labada sarkaal kula wareegeen xilka, waa Pady Ankunda oo ah afhayeenki hore iyo Cabdi Aadan Xaamud oo ah afhayeenka cusub.
Colonel Cali Aadan Xaamud ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu qeyb ka noqdo howl galada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, iagoo rajo ka muujiyay in xaalada Soomaaliya wax iska bedeli doonto waqtiga dhow.
“Maanta mas’uuliyada garbaha ii saaran waa mid weyn, arrin noo wada taalo, maadaama afkeena ku hadlayo, maadaama aniga wixii iga dambeeyo, ee AMISOm Jabuuti, dowladda sanadaheeda dhibta Soomaaliya taabatay in iyaga taabatay, hadii dowlad iyoc iidan tahay, sharaf ayay ii leedahay” Col. Cali Aadan Xaamud.
Afhayeenka cusub ee AMISOM ee u dhashay Jabuuti ayaa ku hadla, luqadaha Soomaaliga, English, Faransiis, Carabiga iyo Afka Cafariga, waxaana uu ka tirsanaa Ciidamada Jabuuti muddo labaatan sano ah, iyadoo horay uga soo qeyb qaatay tababarka Ciidamada dowladda ee dalka Jabuuti ku soo qaatay.
Colonel Paddy Ankunda oo xilka iska wareejiyey ayaa xilkaasi la wareegay sanadki 2007 markaas oo ay xiligi ugu horeysay ee ay AMISOM soo galeen Muqdisho, hase ahaatee sanadii 2008-dii ayaa la bedelay, mar kale ayuu soo laabtay sanadk 2011.
Jabuuti ayaa qeyb ka ah howlgalka AMISOM, waxaana ciidankeedu ay la wareegayaan amaanka gobolka Hiiraan oo ay haatanba ka joogaan in ka badan 100 askari.
Tartanka ciyaaraha Somaliland oo galay heerkiisa Semifinalka
Dhagayso: dib u eegis dastuurka Soomaaliya lagu sameenayo
Cabqaydiid oo Muqdisho soo gaaray
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo goobo hor leh ka qabsaday Al-Shabaab
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho dib ugu soo laabtay
Somalia: CECAFA referees undergo fitness test
Police kill terror suspect in Mombasa and recover two grenades
Mandera crime wave blamed on foreigners